ASAVALIWE NAMANJE AMABHISHI – Sivubela intuthuko Newspaper
ASAVALIWE NAMANJE AMABHISHI
AZOQHUBEKA nokuvalwa amabhishi asentshonalanga yeKwaDukuza,oGwini olusenyakatho yeKwaZulu Natal.
Lezi zindaba ziqinisekiswe yiwona kanye lo Mkhandlu oholwa nguKhansela Dolly Govender.Lo Mkhandlu unxusa wonke amalunga omphakathi akwaDukuza ukuthi athi ukuma kancane ukuhambela amabhishi.
Amabhishi okukhulunywa kakhulu ngawo lapha asuka oTongaat River kuze kuyokapakela kwiSalt River. Ukuvalwa kwawo kubangelwa umonakalo ongemuhle owenzekile ngesikhathi kudlange kakhulu izibhelu emasontweni amathathu edlule. Umonakalo omkhulu udaleke ngesikhathi kuhlaselwa inkampani yamakhemikhali yaseCornobia.
Lo Mkhandlu uthi kungakuhle uma wonke amalunga omphakathi engeke aze azihlanganise nokuningi okujwayele ukuthi kwenziwe emabhishi. Phakathi kwalezo zinto umphakathi wakwaDukuza onxuswa ukuthi ume kuzona ezijwayele ukwenziwa emabhishi kubalwa ukubhukuda, ukudoba, ukuthathwa kwezilwane ezifile nokunye okuningi abavamise ukukwenza.
Ukuqoqwa kwanoma yini elahlwe ebhishi kunxuswa umphakathi ukuba uziqhelelanise kukhona ngoba kungaba yingozi enkulu kumuntu osadla anhlamvana. Lokhu kuvalwa kwamabhishi kungokwesikhashana. Kuzoqhubeka kubonakale kuze kube izinto zonke zibonakala zibuyela esimweni esejwayelekile.
Kunxuswa amalunga omphakathi ukuthi abe nesineke asebenzisane neziphathimandla kulolu hlelo lokuhlanzwa kwamabhishi. Njengamanje izimpilo zabantu yizona eziseqhulwini ngaphezulu kwezinto zonke.
UMkhandlu waKwaDukuza wazisiwe ukuthi njengamanje sekuhlonzwe inkampani ezohlanza iqinisekise ukuthi konke kuhamba kahle emabhishi. Ithimba leqophelo eliphezulu elijutshiwe ukuba lenze lo msebenzi lizobheka ukuthi kukhona yini izinto ezingalungile ezilahlwe emabhishi.
Kuthathwe amasempula ahanjiswa kochwepheshe ukuze babheke ukuthi busakhona yini ubungozi ngokuvulwa kwamabhishi. Imiphumela izobuya ngesonto elizayo ukuthi kungaqhutshekwa yini nokuza kwabantu emabhishi kanjalo nokwenziwa kwezinto eziyimixhantela ezivamise ukwenziwa ngabantu emabhishi.
Iziphathimandla okwamanje zimatasa zisabhekisisa kahle isimo nomthelela obe khona emabhishi ngezikhathi zezibhelu. Kunxuswa abahlali baKwaDukuza ukuthi babike ukubulawa kofishi kule nombolo elandelayo ethi: 083 253 6618.
AbakwaMarine Safety Unity bangaxhunywa ku:steveh@kwadukuz.gov.za noma kushayelwe inombolo ethi: 083 652 5021 ngezikhathi zomsebenzi.
I-Sassa icela ama-akhawunti kwabahola uR350
I-Cogta iwele ngelibanzi ngokusebenza kwezimali zika-2020/2021